प्रचण्डका कमजोरीमा टेकेर व्यवस्थामाथि धावा बोल्नु गलत « Janata Samachar
गौरीशंकर जन्मिदा मान्छे भएर जन्मेका थिएनन्, थारु भएर जन्मेका थिए । उनका बा आमा देशका जनता थिएनन्, साहु महाजनका कमैया थिए । देशको नागरिक बन्न गौरीशंकरहरुले निकै लामो समय र परिस्थितिका थुप्रै उतारचढावहरु झेल्नु प-यो । बिहान बेलुकाको खाना खान र उठ्न, बस्नसमेत साहु महाजनको अनुमति लिनुपर्ने समाजमा जन्मेहुर्केका गौरीशंकर आज देशको शासनसत्ताको महत्वपूर्ण संयन्त्रको नेतृत्व सम्हाल्नुपर्दा आफ्नो बारेमा आफै निर्णय गर्न सक्षम बने ।
कैलाली क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित नेकपाका नेता गौरीशंकर थारु पुष १० गते शुक्रबार दिउँसो माइतीघर मण्डलामा थिए । उनी प्रचण्ड नेपाल समुहको विरोध आन्दोलनमा सहभागी थिए । उनलाई कसैको फोन आयो । कुरा सकिएलगत्तै उनले मोबाइल खल्तीमा राखे र पिसाब फेर्ने बहानामा भीडबाट निस्किए । साँझ अचानक उनी मन्त्री बनेको खबर मिडियामा आयो । मन्त्री बन्नु चार दिन अघि मात्रै उनी आफ्नो गृहक्षेत्र पुगेका थिए । त्यहाँ पनि उनले स्थनीय स्तरका नेता कार्यकर्ताहरुलाई प्रधानमन्त्री ओलीको कदम विरुद्ध कडारुपमा प्रस्तुत हुन प्रशिक्षित गरेका थिए ।
गौरीशंकर थारुले आकष्मिक रुपमा गरेको अनपेक्षित निर्णय सही या गलत के थियो, त्यो विश्लेषणको फरकै पाटो रह्यो । यहाँ महत्वपूर्ण कुरा के छ भने अति संवेदनशील समयमा अति जोखिमपूर्ण विषयमा थारुले आफ्ना बारेमा आफै निर्णय गर्ने हिम्मत गरे । र गौरीशंकर जन्मिदा मान्छे भएर जन्मेका थिएनन्, थारु भएर जन्मेका थिए । उनका बाआमा देशका जनता थिएनन्, साहु महाजनका कमैया थिए । देशको नागरिक बन्न गौरीशंकरहरुले निकै लामो समय र परिस्थितिका थुप्रै उतारचढावहरु झेल्नुपर्यो । बिहान बेलुकाको खाना खान र उठ्न, बस्नसमेत साहु महाजनको अनुमति लिनुपर्ने समाजमा जन्मेहुर्केका गौरीशंकर आज देशको शासनसत्ताको महत्वपूर्ण संयन्त्रको नेतृत्व सम्हाल्नुपर्दा आफ्नो बारेमा आफै निर्णय गर्न सक्षम बने । महत्वपूर्ण कुरा के छ भने उनको यो आत्मविश्वास प्रचण्डका अभियानहरुको वर्षौको शिक्षण प्रशिक्षण र उत्प्रेरणाबाट मात्र तयार भएको हो । यसरी हेर्दा गौरीशंकरको जीवनमा यति विघ्न परिवर्तन र सुधार ल्याउन उनी आफुबाहेक प्रचण्डको भन्दा बढी योगदान कस्को होला र ? आज र भोली गौरीशंकरहरु जहाँकहीं पुगुन्, तर उनका जीवनमा यति विधि सुधार ल्याउन अहम् भूमिका खेल्ने प्रचण्ड कसरी खराब हुन सक्छन् ?
२०५९ सालको चीसो याममा गाउँतिर जनयुद्धको गर्मी बढिरहेको थियो । त्यही गर्मीमा पहिलो पटक पंक्तिकारलाई क्रान्तीमा सहभागी हुने रहर जागेको हो । दुर्गम बस्तीमा जन्मे हुर्केको पन्ध्र वर्षे एक ठिटोलाई ऊ वेला देश, काल, परिस्थिति र दर्शन तथा सिद्धान्तका यावत कुरा थाहा थिएनन् । यत्ति थाहा थियो कि आफु बसेको समाजमा चरम गरिबी, वेरोजगारी र भयानक असमानता छ । विकासको नियमित प्रक्रियाले मात्रै त्यसको अन्त्य हुने छैन । त्यसका लागि संघर्षको आवश्यकता छ । त्यो आवश्यकता जनयुद्धले पुरा गर्न सक्छ । यही सोचले केही वर्ष आँशिक रुपमा त्यसका गतिविधिमा सहभागी भइयो ।
स्नातक अध्ययन पुरा भएपछि पूर्णकालिन राजनीतिमा सहभागी भएर सामाजिक सुधारमा अघि बढ्ने रहर पलायो । तर करिब एक दशकको अन्तरालमा धेरै थोक परिवर्तन भइसकेको थियो । युद्धरत माओवादी खुला राजनीतिमा आएर पनि संसदको सबैभन्दा ठूलो शक्ति बनिसकेको थियो । दु:खद् कुरा के थियो भने नेता, कार्यकर्ताहरु जनयुद्ध अवधिका जस्ता थिएनन् । उनीहरु नव सम्भ्रान्तको रुपमा विकसित हुँदै थिए । जनयुद्धका नायक प्रचण्ड नयाँ महाराजाको शैलीमा अघि बढिरहेका थिए । आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थ र महत्वाकांक्षाका लागि उनी जहाँ जोसँग पनि जस्तोसुकै सम्झौता गर्न उद्यत देखिन्थे । आफ्ना वरिपरि घुमिरहने, सेवा चाकरी गर्ने र कमिसनका पोका पुन्तरा चढाउने बाहेक अरुलाई उनले गन्दै गन्दैनथे । फरक मत र फरक विचार राख्ने आफ्नै सहकर्मीलाई पनि उनले पाखा लगाइरहेका थिए । उनले गाऊँ तहसम्मै आफूजस्तै कार्यकर्ता तयार पारेका थिए । उनीहरुलाई कार्यकर्ता होइन दास भन्न सुहाउँथ्यो ।
जसरी प्रचण्डकाे आफ्नो वरिपरी पहिलो तहका दासहरुको घेरा तयार थियाे, त्यसरी नै उनीहरुले दोस्रो तहका आफ्ना दास तयार गरेका थिए । त्यसरी नै तल्ला-तल्ला तहमा स्तरअनुसारका दास तयार भए । थोरै संख्यामा मात्रै इमान्दार कार्यकर्ता त थिए, तर उनीहरुको अस्तित्व महत्ताहीन थियो । दासजस्ता मानिसबाहेक अरुको कुनै महत्ता थिएन, त्यहाँ । उनीहरु समाजका तल्लो तहका जनतासँग क्रमशः टाढा हुँदै गइरहेका थिए । बरु दलाल, विचौलिया, ठेकेदार, कमिसन खोरसँग नजिक हुँदै गइरहेका थिए । समग्रमा भन्नुपर्दा जनयुद्धको लक्ष र आधारभूत मान्यताबाट उनीहरु निकै टाढा पुगिसकेका थिए । नि:स्वार्थ र इमान्दार भएर समाज र जीवनस्तर सुधारका लागि राजनीतिमा लाग्नु भनेको केवल जीवन बर्वाद गर्नु मात्र थियो । राजनीतिमा स्थापित हुन उही दास र ठेकेदार शैलीमा हिंड्न सक्नुपर्थ्याे । यिनै परिदृष्यहरु देखेरे पूर्णकालिन राजनीतिमा होमिने रहर त्यसै-त्यसै मुर्झाएर गयो ।
खुला राजनीतिमा आएपछि प्रचण्डले ध्यान नदिँदा पार्टी संगठनमा स्थापित भएका विधि, प्रवृत्ति र नेता/कार्यकर्ता आज पनि जस्ताका त्यस्तै छन् । त्यसैको एक उदाहरण हुन, गौरीशंकर थारु । थारुले दस करोड ठगी गरेको आरोप सहितको मुद्दा कैलाली जिल्ला अदालतमा चलिरहेको छ । हल्ला छ की यही मुद्दा व्यवस्थापन गरिदिने शर्तमा उनी मन्त्री बनाइएका हुन् । यसबाट सहजै बुझ्न सकिन्छ कि, थारुले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका कारण दुई घण्टा अघिसम्म अँगालेको बाटो चटक्कै बिर्सेर नयाँ सम्झौता गरे । तर यो प्रवृृत्ति प्रचण्डकै गोडमेलबाट उब्जिएकोमा शंका छैन । विगतमा प्रचण्डले पनि आफ्ना निहित स्वार्थ पुरा गर्न नीति, सिद्धान्त र दर्शनलाई बेवास्ता गरेर अनेक खाले सम्झौता गरेकाे भनिन्छ । उनका कार्यकर्ताले पनि उनबाट यो प्रवृत्ति ‘अच्छा’ तरिकाले सिकेका छन् ।
यहाँ गौरीशंकरलाई एक पात्रको रुपमा हैन, एक प्रवृत्तीको रुपमा प्रस्तुत गर्न खोजिएको हो, र त्यो प्रवृत्तिको निर्माणमा प्रचण्ड स्वयंकाे भूमिका छ । उनले निरूपण गर्न नसकेकाे वा नखाेजेकाे प्रवृत्ति हाे याे ।
कुनै व्यक्ति हरेक साँझ अत्यधिक मदिरा सेवन गर्छ र घरमा झगडा गर्छ तर समाज निर्माणका हरेक कार्यहरुमा दत्तचित्त भएर लाग्छ । अर्को कुनै व्यक्ती धुम्रपान, मध्यपान केही गर्दैन हरेक साँझ पूजाआजा गरेर मात्र खाना खान्छ तर कुनै पनि सामाजिक कर्महरुमा सहभागी हुँदैन, मौका परे थिचोमिचो गरिहाल्छ । तुलना गरौं, कुन व्यक्ति असल र कुन खराब !
कुनै एक व्यक्ति सधैँ सबै सन्दर्भमा असल मात्र या खराब मात्र हुन सक्तैन । हरेकको जीवनका केही असल र केही खराव पाटाहरु हुने गर्छन् । व्यक्तिका असल गुणहरुले समाजमा कति प्रभाव पा-यो र खराब गुणले कति प्रभाव पार्यो भन्ने कुरा बढी महत्वपूर्ण र आम सरोकारको विषय हो । कुनै व्यक्ति हरेक साँझ अत्यधिक मदिरा सेवन गर्छ र घरमा झगडा गर्छ तर समाज निर्माणका हरेक कार्यहरुमा दत्तचित्त भएर लाग्छ । अर्को कुनै व्यक्ती धुम्रपान, मध्यपान केही गर्दैन हरेक साँझ पूजाआजा गरेर मात्र खाना खान्छ तर कुनै पनि सामाजिक कर्महरुमा सहभागी हुँदैन, मौका परे थिचोमिचो गरिहाल्छ । तुलना गरौं, कुन व्यक्ति असल र कुन खराब !
विगत अढाई दशकको नेपाली राजनीतिमा सर्वाधिक चर्चामा रहेका पात्र हुन् – प्रचण्ड । सामाजिक रुपान्तरणको अभियान, सत्ता सञ्चालनको प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष जिम्मेवारी, राजनीतिक विग्रह र व्यवस्थापन, दर्शन-सिद्धान्त तथा व्यवहारका उतारचढाव जस्ता विषयमा पनि उनी अग्रस्थानमा नै देखिन्छन् । उनका कर्मले जनतामा कहिले अथाह आशा छाउने गरेको छ भने कहिले भयानक निराशा पनि। देशमा पछिल्लो पटकको परिस्थिति निर्माणमा उनी पनि जिम्मेवार छन् । उनै प्रचण्डको व्यक्तित्वका केही सकारात्मक र नकारात्मक पाटाहरुको विश्लेषण गर्ने प्रयास पनि हाे याे आलेख ।
कल्पना गरौं, २०५२ साल अघिको समाज कस्तो थियो ? समाजमा आधा संख्या मात्रै जनता थिए । बाँकी आधा त दलित, थारु, जनजाति, कमैया, कमलरी, हली आदि थिए । उनीहरुका बाँच्ने शैली कति दयनीय थिए ? समाजमा उनीहरुको स्थान कस्तो थियो ? राज्यका थोरै मात्र व्यक्तिसँग शासन सत्ताको अधिकार थियो । बाँकी तिनका रैतीहरु थिए । थोरै मात्र व्यक्तिसँग सयौं एकड जमिन थियो । बाँकी तिनका बँधुवा मजदुर र कमैया थिए । थोरै मात्र व्यक्तिका मठमन्दिरहरु थिए, बाँकीले तिनका डिलमा बसेर दमाहा बजाउने, सहनाई फुक्ने या जुठोपिठो सफाई गर्नुपर्थ्याे । थोरै मात्र व्यक्तिका हातमा गुठी र प्रतिष्ठान थिए । बाँकी अरुले तिनका सभा समारोहमा उभिएर जय जयकार गर्नुपर्थ्याे । कुनै एक मान्छेलाई छोएकै कारण अर्को एक मान्छे अशुद्ध हुने र सुनपानी छर्केर शुद्ध गरिन्थ्यो । बजारमा पैसा तिरेर पनि मालसामान किन्न पाउने अधिकार थिएन । समाजको एक वर्ग सदा शीर निहुराएर हिंड्थ्यो भने अर्को एक वर्ग तिनका शीरमा टेकेर हिँड्थ्यो । राज्य सञ्चालनका निकायहरुमा महिला र निम्न वर्गको उपस्थिति दयनीय थियो । देशको सुरक्षा संयन्त्रमा महिलाको उपस्थिति कल्पना भन्दा परको कुरा थियो ।
कुनै एक मान्छेलाई छोएकै कारण अर्को एक मान्छे अशुद्ध हुने र सुनपानी छर्केर शुद्ध गरिन्थ्यो । बजारमा पैसा तिरेर पनि मालसामान किन्न पाउने अधिकार थिएन । समाजको एक वर्ग सदा शीर निहुराएर हिंड्थ्यो भने अर्को एक वर्ग तिनका शीरमा टेकेर हिँड्थ्यो । राज्य सञ्चालनका निकायहरुमा महिला र निम्न वर्गको उपस्थिति दयनीय थियो । देशको सुरक्षा संयन्त्रमा महिलाको उपस्थिति कल्पनाभन्दा परको कुरा थियो ।
तर आज समय धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । तराईका भैँसीपालक कृषको छोरा राष्ट्र प्रमुखको आसनमा पुगिसक्यो । यसले तमाम आदिवासी जनजाती, पिछडा वर्गका छोराछोरी पनि राष्ट्र प्रमुख बन्ने सपना देख्न सक्ने भएका छन् । गणतन्त्रको आवाज उठाउँदा हत्या गरिएका नेता मदन भण्डारीकी पत्नी गणतन्त्र नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति बनेकी छिन । जुन स्थापित व्यवस्थाले उनलाई यो स्थानमा पुर्यायो, प्रचण्डले नेतृत्व गरेको संघर्षको एक उपलब्धी त्यो पनि हो । प्रचण्डका अत्यन्त निकटका पात्र मानिएका केपी ओलीको निगाहमा विद्या भण्डारी राष्ट्रपति बनेको चर्चा सामाजिक सञ्जालमा हेर्न पाइन्छ । तर उनै ओली सशस्त्र जनयुद्धको मात्र हाेइन, बयलगाढामा चढेर अमेरिका नपुगिने भन्दै गणतन्त्रको आन्दोलनको समेत खिल्ली उडाइरहेका थिए । आफ्नो कुनै चाहना नभएको र सहभागिता नभएको तर जनताको अथाह संघर्ष र बलिदानीबाट स्थपित भइसकेको गण्तन्त्रलाई सकेसम्म अझै पनि नष्ट पार्ने ओलीको भित्री मनसाय उनका गतिविधिबाट देखिन्छ ।
जिम्मेवारीमा पुगिसकेपछि व्यक्तिले कस्तो इमान्दारिता र नैतिकता देखाउँछ, त्यो फरकै कुरा, तर यो व्यवस्थाको उपयोग गरेर शासन सत्ताको उच्चतम स्थानमा देशको जुनसुकै नागरिक पुग्न सक्छ, या पुग्न पाउने समान हक सबैलाई छ भन्ने कुरा स्थापित भएको छ । जुन व्यवस्थाकाे नेता हुन्, प्रचण्ड ।
कतिपय मान्छे तर्क गर्छन् – ‘गणतन्त्र माओवादी संघर्षको कारण आएको होइन, सात दलको जनआन्दोलनको कारण मात्र आएको हो ।’ यो राजनीतिक साख जोगाउने तर्क मात्रै हो । कल्पना गरौँ, प्रजातन्त्रका लौह स्तम्भ मानिएका गणेशमान र आफ्नै सहोदर दाजुसमेत रहेका जननेता मानिएका विपी कोइरालालाई समेत नमानेका अहमतावादी नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला कुन कारणले प्रचण्डसँग सहकार्य गर्न पुगे ? प्रचण्डको संघर्षको अभियानमा कुनै शक्ति नहुँदो हो त कोइराला उनीसँग सहकार्यको हात बढाउन भारतका शहरमा उनलाई खोज्दै पुग्ने थिएनन् । तत्कालिन नेपाली कांग्रेस, एमाले लगायत दलका नेताहरु माओवादी आन्दोलनको आडभरोसा विना राजासँग संघर्ष गर्ने हिम्मत गर्ने थिएनन् । राज्यशक्ति राजाको हातमा थियो भने त्यसको वैकल्पिक शक्ति तत्कालिन माओवादीसँग थियो । राजाबाट त्रसित भएका तत्कालिन सात दल माओवादी शक्तिको धेरै आडभरोसा मानेरै ऊसँग सहकार्य गर्न पुगेका हुन । त्यो सहकार्यको सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष के थियो भने खुल्न नसकेका र बोल्न डराएका आम जनता समेत खुलेर सडकमा आए र व्यवस्था विरुद्ध साझा आवाज उठाए । जसले आजको परिवर्तनलाई छिटो स्थापित गर्यो । प्रचण्डले आफ्नो संघर्षका दौरान उठाएका शासन व्यवस्था सम्बन्धी सबै मुद्दाहरु स्थापित गरेरै छोडेका छन् । बाँकी रहेको एक महत्वपूर्ण काम हो सबै सक्षम जनताका लागि देशभित्रै सुरक्षित र भरपर्दो रोजगारी स्थापना । यही काम पुरा नभएका कारण प्रचण्डको अभियान अधुरो सावित भएको छ । यो पुरा हुन सक्यो भने बाँकी धेरै कुरामा सुधार हुनेछ ।
पुरानो सत्ताका उच्च मध्यम वर्गीय तथा आजका नवसम्भ्रान्तहरु प्रचण्डका कारण सत्र हजार नेपालीले ज्यान गुमाउनु परेको कथन बारम्बार उच्चारण गरिरहेका छन् । उनीहरुका नजरमा त्यो साँचो देखिएला, देखिने नै भयो । तर जुन व्यवस्थाका विरुद्ध प्रचण्डको नेतृत्वमा संघर्ष चल्यो त्यो व्यवस्थाका कारण मारिएकाहरुको तथ्यांक उनीहरुले राखेका छन् ? कति कमैयाहरु साहु महाजनका पयरले कुल्चिएर मारिए ? कति कमलरीहरु बलात्कृत भएर मारिए ? कति दलितहरु कथित उपल्लो जातका व्यक्तिहरुबाट पानी छोएको र मन्दिर टेकेको निहुँमा मारिए ? कति कति मगर, गुरुङ्ग मजदुरहरु दलाल र ठेकेदारहरुबाट मारिए ? निम्न वर्गीय मान्छेहरु शताव्दियौंदेखि शोषित, अपहेलित र अपमानित भएर बाँचे ? यसको हिसाब आजका सम्भ्रान्तहरुले राखेका छन् ? जनयुद्ध हुन्थेन भने समाजभित्रै टोल छिमेक भित्रै यस्ता हत्या, बलात्कार थिचोमिचोको संख्या आजसम्म कति पुग्थे होलान् ?
केहीले देशको मुर्दाशान्ति र विभेद सहितको सामाजिक साहिष्णुताको पनि वकालत गर्दै आएका छन् । उनीहरुको हास्यास्पद तर्क छ – ऊ बेला समाजमा सबै मिलेर बसेका थिए, प्रचण्डले सामाजिक एकता खल्बल्याए । उच्च वर्गसँग योभन्दा भरपर्दो तर्क नै के हुन्छ र ? यथार्थ के हो भने ऊ बेला सबै मिलेर बसेका थिएनन्, एक वर्ग सामाजिक अग्राधिकारसहित शोषण दमनमा व्यस्त थियो भने अर्को वर्ग त्रसित र भयभित भएर सबै कुरा सहेर बसेको थियो । एक वर्गले अरुको थिचोमिचो गरेर निरन्तर विलासिता बाँचिरहनु अनि एक व्यक्तिले उक्त थिचोमिचो सहेर चुपचाप दोस्रो दर्जाको मान्छे भएर बाँचिरहनु भनेकै सामाजिक सद्भाव र एकता हो ? त्यस्तो खाले सद्भाव र एकताको विग्रह प्रचण्डले गराएकै हुन् । जसको कारण आज देशभित्रका सबै मान्छे जनता र सबै जनता मान्छे बनेका छन् । आज देशका महिला, जनजाति, दलित, पिछडा वर्ग, लोपोन्मुख समुदाय, अपाङ्ग सबैको नीति नर्माणको तहमा उचित सहभागिता सुनिश्चित भएको छ ।
सदियौं देखिको भारतीय एकाधिकारको अन्त हुनसक्छ र आत्मनिर्णय सहितको सन्तुलित परराष्ट्र नीति निर्माण हुन सक्छ भन्ने कुराको सन्देश प्रचण्डले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा दिए । जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रहितका महत्वपूर्ण निर्णय गर्न नपाउने हो भने कुर्चीमा बसिराख्नको अर्थ नहुने भन्दै नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिने पनि उनै निस्किए । यो तथ्य विश्लेषण गर्दै गर्दा वर्तमानका प्रधानमन्त्री हेरौं, देशैभर आलोचना भइरहँदा पनि आफ्नै दलका बहुसंख्यक सदस्यले मन नपराउँदा पनि आफूले चाहेजस्तो गर्न नपाउँदा नैतिकताको राजिनामा होइन, बरु संसद नै विघटन गरिदिए । ओली प्रजातन्त्रका लागि चौध वर्ष जेल बसेका हुन भनेर उनका समर्थकहरुले प्रचार त गर्ने गर्छन तर उनी कुन संघर्षको नेतृत्व गरेर, कुन मुद्दा लिएर र कहाँ कोसँग लडेर भिडेर जेल गएका हुन भन्ने कुरा कतै सुनिदैन । बरु संघर्षका कुनै पनि मोर्चामा ओली अग्रस्थानम कहिल्यै उभिएनन । उनको जेलयात्रा आकष्मिक र अस्वभाविक थियो भनेर उनकै सहकर्मीहरुले बताउने गरेका छन्, त्यो फरकै कुरा । कारण जेसुकै भए पनि संघर्षका दौरान उनले पनि यातना भोगे त्यसलाई सकारात्मक रुपमै बुझ्नु उचित हुन्छ ।
निसन्देह भन्न सकिन्छ, प्रचण्डको वर्तमानको दैनिकी र वैयत्तिक जीवन सर्वहाराको प्रतिनिधित्व गर्ने खालको छैन । यावत आलोचना र यथेष्ट खिसिट्युरीका बाबजुत पनि उनले कोट पाइन्टमा टाई सजाउन छोडेका छैनन् । यतिविधि आलोचना हुँदाहुँदै पनि कुख्यात ठेकेदारकै घरमा टाँसिएर बसिरहनु पर्ने, दलाल विचौलियाहरु सँग बसेर चियाचपाती भोजन गर्नु, परिवार र पारिवारिक नातागोताको घेरालाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बाँड्दै जानु, उही विषयमा पनि समय सन्दर्भमा बोली फेर्दै जानु, अस्पष्ट र अस्थीर विदेश नीति, समय समयमा सार्वजनिक भएका पार्टीका आन्तरिक बैठक र प्रशिक्षणका विवादास्पद भिडियो सामग्री र वक्तव्य आदि प्रचण्डको जीवनका नकारात्मक पाटा हुन ।
प्रचण्डले अङ्गिकार गरेको राजनीतिक सिद्धान्त, दर्शन र शासन सञ्चालनका गतिविधिमा प्रश्न उठाउन सकिने थुप्रै विषय छन् । आफ्नो राजनीतिक धरातल तयार गरिदिएका र संघर्षको कष्टप्रद यात्रामा संगै हिँडेका सहकर्मीलाई समेट्न नसक्नु तर फरक विचार र आदर्श बोकेका व्यक्तिहरुसँग सहकार्य गर्दै जानु उनको राजनीतिको सबैभन्दा गलत आचरण हो । कुन कारणले बाबुराम भट्टराई गलत र खिलराज रेग्मी ठीक ? कुन कारणले मोहन वैद्य गलत र केपी ओली सही ? स्थानीय निर्वाचनमा कुन कुन कारणले नेपाली कांग्रेस नजिकको र नेकपा एमाले टाढाको ? अनि कुन कारणले चार महिना पछिको प्रदेश र संघको निर्वाचनमा एमाले नजिक, कांग्रेस टाढा ? आफ्नै टाउकाको मूल्य तोक्ने शेर बहादुर देउवाले आफ्ना कुन कुन आनीबानीमा सुधार गरे र प्रचण्डले उनीसँग सत्ताको साझा अभ्यास गरे ? कुन सिद्धान्त र दर्शनको धरातलमा टेकेर उनले राजतन्त्रको मियो मानिएका कमल थापासँगै मिलेर शासन सञ्चालन गरे ? प्रचण्डले आज भनेजस्तै केपी ओली तानाशाही प्रवृृत्तिका मान्छे नै हुन भने दुई दुई पटक उनैलाई सरकार प्रमुखको जिम्मेवारीमा किन सिफारिस गरियो ? उनै माधव नेपाल कुनै समय देशलाई नभइ नहुने, कुनै समय देशलाई नभए पनि हुने, कहिले विषबृक्ष कहिले कल्पबृक्ष कसरी बने ? प्रचण्डको राजनीतिक जीवनमा यस्ता थुप्रै अनुत्तरित प्रश्नहरु छन जसमा नीति, सिद्धान्त र दर्शनको कुनै रंग देखिदैन । सिद्धान्त, दर्शन, नीति आदिको बेवास्ता गरी प्रचण्डले गरेका थुप्रै गतिविधिको नतिजा प्रचण्ड र उनको दलले त राम्रैसँग भोगेको छ, जुन आज देशले पनि भोगिरहेको छ ।
यस्ता थुप्रै प्रश्नहरुका बाबजुद पनि प्रचण्ड विगतको संघर्षले नै नेपालमा केही स्मरणीय उपलव्धी हाँसिल गरेको छ । प्रचण्डको व्यक्तिगत जीवनमा जस्तोसुकै परिवर्तन र स्खलन आएपनि उनले स्थापित गरेको व्यवस्थालाई भने त्यसले खास असर गर्ने छैन । जनताले पाएका अधिकार फिर्ता हुने छैनन् । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा उनले ‘हातहातमा मोवाइल, घरघरमा इन्टरनेट’ को नारा प्रस्तुत गरेका थिए । ऊ वेला पनि धेरै आलोचकले उनको यो नारालाई हाँसो र खिसीमा उडाएका थिए । तर आज उक्त नारा वास्तविकतामा परिणत भइसकेको छ । प्रचण्डको जीवनमा जस्तो पतन आओस्, देश भने उनको त्यागले जन्माएका उपलब्धीबाट पछि फर्किने छैन ।
जुन वर्गका सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, साँस्कृतिक लगायत सबै खाले अग्राधिकार वैैधानिक रुपमै खोसिएका छन्, उनीहरुले त प्रचण्डलाई कहिल्यै पनि असल पात्रको रुपमा हेर्ने छैनन् तर जो सदियौं देखिको बहुआयामिक दलनबाट मुक्त भए र सामाजिक समतासहित आफ्ना जीवनका योजना आफै बनाउन सक्ने भए उनीहरुका नजरबाट भने प्रचण्ड असल पात्र नै देखिन्छन् । त्यो परिदृष्यमा प्रचण्डको वैयक्तिक जीवनका स्खलनहरुले खासै अर्थ राख्दैनन् । समाजको तल्लो तहका माानिसहरुलाई राष्ट्रिय मूलधारमा ल्याएर नीतिगत तथा चेतनापरक समानता स्थापित गर्नु प्रचण्डको सबैभन्दा सबल पक्ष हो भने परिवर्तनलाई व्यवस्थित गर्न नसक्नु उनको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो । त्यसैले प्रचण्डका व्यक्तिगत कमजोरीमा टेकेर व्यवस्थामाथि धावा बोल्नु सर्वथा गलत हुन्छ ।
प्रचण्डका अत्यन्त निकटका पात्र मानिएका केपी ओलीको निगाहमा विद्या भण्डारी राष्ट्रपति बनेको चर्चा सामाजिक सञ्जालमा हेर्न पाइन्छ । तर उनै ओली सशस्त्र जनयुद्धको मात्र हाेइन, बयलगाढामा चढेर अमेरिका नपुगिने भन्दै गणतन्त्रको आन्दोलनको समेत खिल्ली उडाइरहेका थिए । आफ्नो कुनै चाहना नभएको र सहभागिता नभएको तर जनताको अथाह संघर्ष र बलिदानीबाट स्थपित भइसकेको गण्तन्त्रलाई सकेसम्म अझै पनि नष्ट पार्ने ओलिको भित्री मनसाय उनका गतिविधीबाट देखिन्छ ।
(लेखक प्रगतिशील लेखक संघ नेपालका सचिवालय सदस्य हुन्)